Poll ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခု အပူတပြင်းလိုအပ်နေပါတယ်. Polldaddy ကို ဇော်ဂျီဖောင့်ထည့်သွင်းတတ်သူများ ရှိရင်လည်း တဆိတ်လောက် ကူညီပေးစေလိုပါတယ်. တစ်ခြားကောင်းတဲ့ Poll Site များသိရင်လည်း ပြောပြစေလိုပါတယ်.
ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း လိုက်ရှာနေတာ အချိန်မလုံလောက်မှုနဲ့ မပြည့်စုံမှုတွေ ရှိနေလို့ ခုလို အကူအညီတောင်းရတာပါ. မြန်မာဘလော့ဂ် စာအုပ်အတွက် နာမည်များကို မဲခွဲဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက် ဆိုတာ အားလုံးအသိပဲ ဖြစ်မှာပါ. အရင်သုံးနေတဲ့ BlogPolling က IP Lock လုပ်လို့ကို မရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်. IP Lock လုပ်လို့ရတဲ့ Poll Site တွေကျတော့လည်း မြန်မာလို ရိုက်တာ မပေါ်တဲ့ ပြဿနာရယ်. Option အများကြီး လက်မခံနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေရယ် ရှိနေပါတယ်. ဘလော့ဂါ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကို အကူအညီတောင်းပါတယ် ခင်ဗျာ…
Comment ထဲမှာ ၀င်ရေးပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်… aungyan@gmail.com ကိုလည်း Email ပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
ကိုရန်အောင်ခင်ဗျ။ ကျွန်တော့်ဘလော့မှာတော့ Polldady ကနေ Poll တစ်ခု ဇော်ဂျီနဲ့ ဖန်တီးပြီးထည့်ထားတာ အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ။ အခြား Poll Site တွေ ကျွန်တော်တွေ့မိသလောက်အောက်မှာ လင့်တွေပါခင်ဗျာ။ သေသေချာချာတော့ မသုံးဖူးဘူးခင်ဗျ။